बाटोमा अ’चानक भेटेको पैसा टि’प्ने कि छाड्ने ? जान्नुहोस् - Mitho Khabar
बाटोमा अ’चानक भेटेको पैसा टि’प्ने कि छाड्ने ? जान्नुहोस्
June 17, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on बाटोमा अ’चानक भेटेको पैसा टि’प्ने कि छाड्ने ? जान्नुहोस्
अ’क्सर सपनामा बाटोमा पैसा भेटिएको देखिन्छ । धेरैको कल्पनामा बाटोमा हिड्दा हिड्दै पैसा भेट्ने सपना पनि हुनसक्छ । र कतिपय अवस्थामा साच्चै बाटोमा पैसा पनि भेटिने गर्दछ । तर के बाटोमा भेटिएको पैसा टिप्नु हुन्छ त ?
कतिपयले बाटोमा भेटिएको पैसालाई शुभ मान्दछन् भने केहिले यसलाई अशुभको प्र’तिक मान्दछन् । हिन्दु धर्ममा धनलाई लक्ष्मीका रुपमा मान्ने गरिन्छ ।यसर्थ अप्रत्याशित रुपमा पाइने पैसा अर्थात धनलाई लक्ष्मीको रुप ठानेर राम्रो मानिने गरिन्छ । तसर्थ केहिले बाटोमा भेटिएको पैसालाई लक्ष्मी कृपा मान्दछन् ।
त्यस्तै कतिपय मानिस बाटोमा भेटिएको पैसालाई अशुभ मान्दछन् । उनीहरुको मान्यता अनुसार बाटो अर्थात जमिनमा भेटिएको पैसा जो व्यक्तिको हातमा पुग्दछ यसले हा’नि गराउँछ ।तसर्थ यसलाई टिप्नु हुदैन । यदि बाटोमा भेटिएको पैसा टिप्यो भने शरीरमा भएको उ’र्जा सो पैसाको माध्यमबाट जति जति एकबाट अर्काे ब्यक्तिमा पैसा जान्छ त्यति नै उ’र्जा घ’ट्दै जान्छ ।
त्यसैले उनीहरु यसरी भेटिएको पैसा लिन नहुने तर्क गर्दछन् ।यदि बाटोमा हिड्दा बाटोमा पैसा भेटियो भने मानवियता र ब्य’वहारीकताका आधारमा जसले त्यो पैसा ह’रायो त्यसको खोजि गरी भेटेर फ’र्काउनु प’रोकार हुन्छ । जुन पैसा आफ्नो होइन त्यसबारे लोभ पाल्नु उपयुक्त हुदैन ।
यदि ह’राउने ब्यक्तिको पहिचान गर्न सकिएन भने यसको जानकारी सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य माध्यमबाट दिएर उसलाई फ’र्काउने प्रयाश गर्न सकिन्छ । यदि त्यो पनि स’म्भव नभए कुनै प’रोपकारी काम, दान वा धार्मिक काममा लगाउन सकिन्छ ।यसमा पैसा भेट्ने मानिसको नि’यत र स्वभाव नै मुख्य मानिन्छ
धार्मिक धर्म शास्त्र अनुसार स्त्रीले कहिल्यै गर्न नहुने यी काम
घर खेत बगाएर घरबारविहीन बनायो अब यी केटाकेटीलाई कहाँ राख्ने के खुवाउने ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
आफू सुतेको भिडियो लाइभ गरेर यसरी लाखौं कमाइरहेछन् मानिसहरु हेर्नुहोस्
April 4, 2020 mithokhabar
October 21, 2020 mithokhabar
लकडाउन अझै एकसाता लम्बिने, प्रधानमन्त्रीले देशबासीको नाममा पुनः सम्बोधन गर्ने